Hanomboka orinasa marketing aho
Zoma, Desambra 3, 2010 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Nick carter
Inona no azonao rehefa afangaro ny tahan'ny tsy fananan'asa ambony miaraka amin'ny fiarahamonina be fampianarana (milaza ny sasany hoe be fianarana loatra)? Mpanolo-tsaina, mazava ho azy. Betsaka amin'izy ireo. Raha dinihina tokoa, raha tao amin'ny varotra orinasa nandritra ny 25 taona ianao izay nanam-bintana ampy mba hahafahan'ny mpampiasa anao mandoa vola anao ho lasa "tompon'ny fitantanan-draharaha" talohan'ny nijanonany tsy nandoa anao mihitsy… iza no tsara kokoa hitantana orinasa marketing !
Misy vazivazy mihazakazaka eo amin'ny sehatry ny asa-maso - izany hoe ny tontolon'ny manam-pahaizana momba ny varotra ivelany, tsy orinasa. Ny vazivazy dia ity: isaky ny misy fandroahana dia mahazo mpifaninana bebe kokoa isika. Ary, na dia tsy misy mpanohana ny fandraharahana lehibe noho izaho aza, dia mbola manana hadisoam-pananahana tsara ihany aho rehefa maro ny olona manantona ny volony.
Inona ny olana? Experience. Amin'ny fananana orinasa, izany hoe tsy amin'ny marketing. Mety ho fananana sarobidy tokoa ianao tamin'ny famolavolana endrika, mpanoratra na mpahay tetikady doka tamin'ny fikambanana teo aloha. Fa izany zavatra niainana izany dia tsy manome fitaovana afa-tsy anao amin'ny famokarana entana azo entina. Ankehitriny eo an-tampon'ny orinasanao manokana dia misy fanamby vaovao tsy maintsy atrehana. Ary tsy ny miharihary fotsiny: ny kaonty, ny hetra, ny HR, ny varotra sns. Na dia ao anatin'ny fitsipi-pifehezana amin'ny varotra aza, ny asan'ny consultant dia hafa lavitra noho ny an'ny manam-pahaizana ao an-trano. Ny consultant dia tsy maintsy mamantatra ireo olana ary mamorona vahaolana efa ela be talohan'ny nanombohan'izy ireo nanatanteraka ny drafitra. Ity consulting avo lenta ity izay maro ireo antsoina hoe marketing consultants no sahirana manome, na tsy jerena mihitsy.
Inona ary no valiny? Moa ve isika, vondrom-barotra, tokony hanalavitra an'ireto olona vao misondrotra ireto amin'ny toe-tsaina tia olona? A fanendrena "manam-pahaizana momba ny marketing" matihanina mila misy? Sa azo natao ho an'ireo miezaka ny fandaharan'asa mpitety faritany manomboka raharaham-barotra?
Amin'ny lafiny maro dia efa misy io programa mpandehandeha io. Mila fanetren-tena iray fotsiny izany: tendren'ny tena ho toy izany. Mihoatra ny vitsivitsy amin'ireo mpanolo-tsaina ara-barotra hajaina fantatro androany no natomboka tamin'ny fanambarana tsy dia mendrika loatra – ny Freelancer. Na dia tsy dia mirehareha loatra amin'ny karatra fandraharahana aza ny freelance, na izany aza, toerana misy ilay mpivarotra mahay - ireo izay mbola tsy vonona ny hisidina irery - mifanaraka amin'ny fomba fitaterana ny marketing ivelany. Tsy hoe famelana mafy amin'ny antso ambany kokoa, fa ho fiomanana amina andraikitra mety mbola tsy vonona hameno azy… fa indray andro, matoky aho fa afaka.
Atombohy ny orinasanao, fa atombohy amin'ny voalohany. Ary, mirary soa.
Tags: fahafahana misafidymahaleotenampandeha tanymasoivoho marketingorinasa marketingfanombohana marketingstartup
Nick Carter dia mpandraharaha tena ao am-pony. Izy no mpanoratra an'i Tsy voaloa, ary koa ny mpanorina ny AddressTwo, a fandraharahana madinika CRM rindrambaiko izay manome mpandraharaha fitaovana sy fizotrany hitantanana ny varotra ataony ary hanaingo ny varotra azy ireo.
Angamba ianao tsy mahay fotsiny amin'ity